မိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစက်ရုံ - China မိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစက်ရုံများထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
ZYX120 compressed အောက်စီဂျင်ကိုယ်ပိုင်ကယ်ဆယ်ရေးသီးခြား
အသုံးပြုခြင်း ZYX120 အထီးကျန် compressed အောက်စီဂျင်ကိုယ်တိုင်ကယ်ဆယ်ရေး (မိမိကိုယ်ကိုကယ်ဆယ်ရန်အတို) သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဖိအားအောက်စီဂျင်ကိုလေထုအရင်းအမြစ်အဖြစ်လက်ခံသည်။ ၎င်းသည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာသေးငယ်သောခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ Aspiration အပူချိန်နိမ့်ခြင်း၊ အဆင်ပြေခြင်း၊ စိတ်ချရခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းစသည်တို့ပါ ၀ င်သောသီးခြားစီဆောက်လုပ်ထားသည့်ကိုယ်ပိုင်အသက်ရှူကာကွယ်ခြင်းစနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောညစ်ညမ်းနေသောကျောက်မီးသွေးတွင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ချို့တဲ့။ အလုပ်လုပ်သောသူတို့သည်လျင်မြန်စွာ ၀ တ်ဆင်သည် ...
ZY45 compressed အောက်စီဂျင် insulated
Insulated Compressed Oxygen Self-Rescuer မော်ဒယ်: ZYX45 အချိန် - ၄၅ မိနစ် ၄၅ မိနစ်ကြာသည်၊ မိမိကိုယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကယ်ဆယ်နိုင်သည်၊ ကိုယ်ပိုင်အကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုထုတ်ယူသည်။ အရည်အချင်းများ - ကျောက်မီးသွေးတွင်းလုံခြုံမှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေါက်ကွဲနိုင်သောအထောက်အထားလက်မှတ်စစ်ဆေးခြင်းစစ်ဆေးခြင်းလျှောက်လွှာများ ZYX45 compressed အောက်စီဂျင်ကိုယ်ပိုင်ကယ်ဆယ်ရေး (မိမိကိုယ်ကိုတိုသည်) -rescuer) သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဖိအားအောက်စီဂျင်ကို၎င်း၏လေထုအရင်းအမြစ်အဖြစ်လက်ခံသည်။ ၎င်းသည်သေးငယ်သောအက္ခရာများရှိသည့်သီးခြားပြီးပြည့်စုံသောတိုက်နယ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသက်ရှုကာကွယ်ခြင်းစနစ်ဖြစ်သည်။
နာရီကိုယ်ပိုင်ပါ ၀ င်သောအသက်ရှူကိရိယာ
အသုံးပြုခြင်းအရေးပေါ်အဖွဲ့များသည်မြေပေါ်မြေအောက်သို့မဟုတ်အောက်၊ အသက်နှင့်လူများကိုမီးသို့မဟုတ်မီးငြိမ်းသတ်သည့်အခါတိုင်း HYZ4 (B) ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ထားသောပိတ်ထားသောတိုက်နယ်အသက်ရှူကိရိယာသည်မိမိကိုယ်ပိုင်ဖြစ်လာသည်။ သတ္တုတွင်းများ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများသို့မဟုတ်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်အောက်စီဂျင်မလုံလောက်သည့်အရေးပေါ်အခြေအနေရှိမြေအောက်ရထားလမ်းများ၌ကယ်ဆယ်ရေးသို့မဟုတ်မီးသတ်ပစ်ခတ်မှုမစ်ရှင်များတွင်အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ HYZ4 (B) ကိုယ်ပိုင်ပါ ၀ င်သောပိတ်ထားသောတိုက်နယ်အသက်ရှူကိရိယာသည်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူအသုံးပြုသူ ၁၀၀၀၀ ကျော်သည် HYZ4 (B) Self-Contains Clos များပေါ်တွင်မှီခိုသည်။
နာရီ - ကိုယ်ပိုင်ပါဝင်သောပိတ်ထားသောတိုက်နယ်အသက်ရှူကိရိယာ
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောအရေးပေါ်အသက်ရှူကိရိယာ) (၄ နာရီအသက်ရှူကိရိယာ) အရည်အချင်းများ - ကျောက်မီးသွေးတွင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလက်မှတ်ပေါက်ကွဲမှုမရှိသောလက်မှတ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လျှောက်လွှာများအရေးပေါ်အဖွဲ့များသည်မြေပေါ်သို့မဟုတ်အောက်တွင်၊ လူတို့၏အသက်ကိုသို့မဟုတ်မီးငြိမ်းသတ်သည့်အခါ၊ HYZ4 ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်ပိတ်ထားသောတိုက်နယ်အသက်ရှူကိရိယာသို့ ၀ င်ရောက်သည်။ ကိုယ်ပိုင်။ သတ္တုတွင်းများ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများသို့မဟုတ်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်အောက်စီဂျင်မလုံလောက်သည့်မြေအောက်ရထားလမ်းများရှိကယ်ဆယ်ရေးသို့မဟုတ်မီးသတ်ပစ်ခတ်မှုများတွင်အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ…
Model: HYZ2 / HYZ4 အရည်အချင်းများ - ကျောက်မီးသွေးတွင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလက်မှတ်ပေါက်ကွဲမှုမရှိသောလက်မှတ်စစ်ဆေးခြင်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုလျှောက်လွှာများအရေးပေါ်အဖွဲ့များသည်မြေပေါ်သို့မဟုတ်မြေအောက်ရှိအသက်များကိုကယ်ဆယ်ခြင်းသို့မဟုတ်မီးငြိမ်းသတ်ခြင်းများပြုလုပ်သောအခါ HYZ2 ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်ပိတ်ထားသောတိုက်နယ်အသက်ရှူကိရိယာသည်မိမိကိုယ်ပိုင်ဖြစ်လာသည်။ သတ္တုတွင်းများ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများသို့မဟုတ်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်အောက်စီဂျင်မလုံလောက်သောအရေးပေါ်အခြေအနေရှိမြေအောက်ရထားလမ်းများ၌ကယ်ဆယ်ရေးသို့မဟုတ်မီးသတ်ပစ်ခတ်မှုမစ်ရှင်များတွင်အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ HYZ2 ကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်သော Circuit Brea ...
Model: UV3000 နိဒါန်း: UV3000 ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မီတာသည်ကျယ်ပြန့်သောရောင်စဉ်တန်းစွမ်းအင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆတိုင်းတာရာတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါယူနစ် Uw / cm2.The အာရုံခံကိရိယာပစ္စည်းများ၏ထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးတိုင်းတာရာတွင်တိကျသည်။ အသုံးပြုမှု - လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းကိုခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အလင်းရောင်ခြည်ဖြာထွက်ရောင်ခြည်ရောင်ခြည်ဒဏ်ကိုတိုင်းတာခြင်း (နေ၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်) တွင်ဗိသုကာဆိုင်ရာအမြှေးပါးများ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးရုပ်ရှင်နှင့်လျှပ်ကာမှုန့်များ၏ပိတ်ဆို့ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစစ်ဆေးခြင်း။
Model: CCZ1000 ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: BJKYCJ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အချိန်မှန်ဖတ်ရှုနိုင်သောခရီးဆောင်ဖုန်မှုန့်ရှာဖွေစက်ဒီဂျစ်တယ် display၊ တိကျသောအတိုင်းအတာ၊ တည်ငြိမ်သောလုပ်ဆောင်မှု၊ အရွယ်အစားသေးငယ်။ အလေးချိန်ပေါ့ပါးခြင်းလျှောက်လွှာ၎င်းသည်မျိုးဆက်သစ်များအားတိုက်ရိုက်ဖတ်ခြင်းနှင့်သယ်ဆောင်နိုင်သောဖုန်မှုန့်ရှာဖွေစက်, အားလုံး၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုသိရှိရန်အသုံးပြုသည်။ တိကျသောတိုင်းတာနိုင်မှုနှင့်တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်း၊ အလေးချိန်ပေါ့ပါးခြင်း၊ လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူတကွပတ်ဝန်းကျင်ရှိဖုန်မှုန့်များသို့မဟုတ်မီးခိုးငွေ့များပေါက်ကွဲစေသောဓာတ်ငွေ့များတည်ရှိရာနေရာတွင်ရှိသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်အလင်းမီတာ luxmeter luminometer 1010C
အင်္ဂါရပ်များ: ၁၊ ကြီးမားသော detect range၊ 200000LUX အထိအများဆုံးတိုင်းတာနိုင်သောအရာ 2, resolution မြင့်မားသော display: 0.1LUX / 0.01FC 3, အလိုအလျောက်ပြောင်းရွေ့မှုရွေးချယ်ခြင်း ၄ ။ အမြင့်ဆုံး၊ အနိမ့်ဆုံးမှတ်တမ်းတင်နိုင်မှုကိုတိုင်းတာပါ။ 5. LUX / FC ယူနစ်ပြောင်းလဲခြင်း 6. ဒီဇိုင်းဖတ်ရှုခြင်း သော့ခတ်သော function သည်တိုင်းတာထားသောတန်ဖိုးကိုသော့ခတ်နိုင်သည်။ ၇။ အလိုအလျောက်အချက်အလက်ကောက်ယူခြင်းမှတ်တမ်းများနည်းပညာညွှန်းကိန်းများ RANGE RANGE RESOLUTION တိကျမှန်ကန်မှု 200LUX 0.1 ± 3% + 10dgts 2000LUX 1 ± 3% + 10dgts 20000LUX 1 ± 4% + 10dgts 200000LUX 1 ± 4% + 10dgts အထွေထွေဝိသေသလက္ခဏာများ။ ..
YSD 130 လုံခြုံစိတ်ချရသောဒစ်ဂျစ်တယ်အသံအဆင့်မီတာ
Model: YSD130 အရည်အချင်းများ - ကျောက်မီးသွေးတွင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလက်မှတ် Explosion-proof Certificate Inspection Certification လျှောက်လွှာများ - YSD130 ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံအဆင့်မီတာသည်သဘာဝအားဖြင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်မြေအောက်ကျောက်မီးသွေးတွင်းနှင့်မိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစစ်ဆေးခြင်းအတွက်ဆူညံသံတိုင်းတာရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ စက်ရုံ၊ ကျောင်း၊ ရုံး၊ ယာဉ်အသွားအလာနှင့်လိုအပ်သောတိုင်းတာမှုများကိုအမျိုးမျိုးသောပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအသံတိုင်းတာခြင်းများတွင်လည်းအသုံးပြုသည်။ အဓိကပေတံ ...
Multi-Function လေဝင်လေထွက်မီတာ JFY-4B
စံပြ； JFY-4B လျှောက်လွှာ - JFY-4B ဘက်စုံသုံးလေဝင်လေထွက်တိုင်းတာခြင်းသည်အလွန်အန္တရာယ်ကင်းပြီးပေါက်ကွဲလွယ်သောကိရိယာဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အပူချိန်၊ မတူညီသောဖိအား၊ လေတိုက်နှုန်းနှင့်မီသိန်းဓာတ်ငွေ့၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုင်းတာရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းကိုလေဝင်လေထွက်ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ HVAC နှင့်ပိုက်လိုင်းစစ်ဆေးခြင်းများတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။ သူတို့ကစက်ရုံမှမထွက်ခွာမီတိကျစွာချိန်ညှိထားသည်။ သင်မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုနေသမျှကာလပတ်လုံးတူရိယာသည်ကြာရှည်စွာတည်ငြိမ်နိုင်သည်။ အဓိက Feature: ဖတ်ရန်လွယ်ကူသည်။
Multi-Function လေဝင်လေထွက်မီတာ JFY-4
စံပြ； JFY-4 လျှောက်လွှာ - JFY-4 ဘက်စုံသုံးလေဝင်လေထွက်တိုင်းတာခြင်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရသောပေါက်ကွဲလွယ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အပူချိန်၊ မတူညီသောဖိအား၊ လေတိုက်နှုန်းနှင့်မီသိန်းဓာတ်ငွေ့၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုင်းတာရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းကိုလေဝင်လေထွက်ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ HVAC နှင့်ပိုက်လိုင်းစစ်ဆေးခြင်းများတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။ သူတို့ကစက်ရုံမှမထွက်ခွာမီတိကျစွာချိန်ညှိထားသည်။ သင်မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုနေသမျှကာလပတ်လုံးတူရိယာသည်ကြာရှည်စွာတည်ငြိမ်နိုင်သည်။ အဓိက Feature: On-sc ဖတ်ရန်လွယ်ကူသည်။
Multi-Function လေဝင်လေထွက်မီတာ JFY-6
Model: JFY-6 ဘက်စုံသုံးလေဝင်လေထွက်မီတာတစ်ခုလုံးလေဝင်လေထွက်တိုင်းတာခြင်းလေဝင်လေထွက်မီတာလေဝင်လေထွက်မီတာလေဝင်လေထွက်လေစီးဆင်းမှုမီတာအရည်အချင်းများ: ကျောက်မီးသွေးတွင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလက်မှတ်ပေါက်ကွဲမှုမရှိသောလက်မှတ်စစ်ဆေးခြင်းစစ်ဆေးခြင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - လေတိုက်နှုန်း၊ အပူချိန်၊ မတူညီသောဖိအား၊ လေထုဖိအား၊ စိုထိုင်းဆ၊ မီသိန်း CH4 အသုံးပြုမှုများ - JFY -6 Multi-Function Ventilation Meter သည်လုံခြုံစိတ်ချရသောပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့် Barometric ဖိအား၊